CHERRY "LYUBSKAYA": SHARAXAAD, BEERITAANKA IYO DARYEELKA NOOCYO KALA DUWAN - CHERRY
Waxaa jira tiro aad u badan oo kala duwan oo ah jeeriga, kuwaas oo ah caan ku ah aagagga cimilada kala duwan. Maqaalkeena waxaa loogu talagalay "Lyubskaya" cherry, kaas oo lagu beeray beeraha Russia tan iyo 1947. Aan ka hadalno sida loo doorto oo loo beero sapling, aynu la tashanno daryeelka, faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka kala duwan.
Cinwaanka wada hadalka "Lyubskaya" waxay ka bilaabmaan sharaxaad kala duwan.
Dabiiciga ah, geedku wuxuu leeyahay qaabdhismeedka qoryaha ah ee qaybta above, heerka ugu sarreeya waa 3 mitir. Taajku waa ballaaran yahay, maaha cufan, kicin. Jilifku waa miro-bunni ah oo daboolaya dildilaasyo yaryar. Dhammaan caleemaha waxaa la jarjaray, iyagoo ka dhaqaaqaya jirridda xagal ba'an. Taarbo-xaashida ma aha mid aad uga duwan noocyada kale, laakiin weli waa mudan tahay in ay dareenka siiyaan. Caleemaha waxaa lagu rinjiyeeyaa midabka caadiga ah ee mugdiga ah, oo leh dherer ah 5 cm, dherer ah oo ku saabsan 8 cm, taargooyadu waa cidhiidhi, geesaha calaamadeysan iyo foorjir ah.
Caleemaha waa caddaan caddaan ah, leh dhexdhexaad ah oo kaliya 3 cm, koobkuna waa cagaar midab leh, gobollada.
Waxaad baranaysaa beerista noocyo kale oo jeeriga ah: "Vladimirskaya", "Molodezhnaya", "Shokoladnitsa", "Kharitonovskaya", "Black Large", "Turgenevka".
Berry waa weyn, wuxuu leeyahay qaab qaabaysan. Waqtiga qaan-gaadhka la kala saari karo waxaa lagu rinjiyey midab madow. Jerriga aan qaangaarka aheyn si adag u xaji dabada, ka dib marka uu bismaayo qayb yar oo la qubey.
Ma taqaanaa? Nooca ugu caansan ee cherry waa cherry macaan. Berry Tani waxaa loo isticmaalay cunto 8 kun oo sano oo kale oo BC. er
Tixgeli sifooyinka beerashada, taas oo go'aamisa suurtagalnimada beeritaanka beertaada. Aan ka falanqeyno shuclada ugu weyn ee saameeya dhalidda iyo xaaladda guud ee geedka.
Si aad u ogaato sida dhabta ah ee gobollada aad u kori kartid kala duwanaanta noocaan ah, marwalba ha u leexin Diiwaanka Gobolka. Kala duwan waxaa lagula talinayaa beeritaanka gobollada soo socda:
Tan iyo cimilada a cherry ah ayaa si toos ah ku tiirsan heerkulka jiilaalka, waa suurtogal in la beero noocyo kala duwan oo gobollada waqooyiga ah. Haddii aad beerato, ka dibna u diyaargarow xaqiiqda ah in geedku aanu noolaan karin 10 sano.
Cherry "Lyubskaya", ka dib marka dib loo eego ee bannaanka u badan, wuxuu horumariyaa ugu fiican oo dhan oo dhirta miraha on carrada ama loamy ciidda. Carrabku waa inuu ahaadaa mid bacrin ah, leh qadar badan oo macdanta ah. Haddii aad ku beerato cherry-ka chernozem, geedku wax horumar ah ma kici doono, iyo dhalidda waxay u dhowdahay ugu badan ee suurtogalka ah.
Ma taqaanaa? Waxaa jira 5 nooc oo waaweyn oo jiir, kuwaas oo markii dambe loo isticmaalay si loo abuuro noocyo iyo rootstocks. 150 ka mid ah noocyada caanka ah, kuwa ugu muhiimsan waa: cherry, steppe, dareemay, Magaleb iyo cherry.
Geedka loo beeray "Lyubskaya"
Marka xigta, waxaanu wax ka qaban doonaa waxyaabihii laga beeri lahaa geed, taas oo ka caawin doonta in laga fogaado daqiiqado aan fiicnayn iyo in la gaaro badbaadada dhakhso ah ee seedling.
Ma aha oo kaliya dhalidda iyo tayada miraha, laakiin sidoo kale, sida caadiga ah, noocyo ama xitaa nooca geed waxay ku xiran tahay seedling saxda ah. Gaar ahaan dhibkani waa mid khuseeya marka iibsiyo geedo badan oo suuqyada kala duwan, meeshii halkii laga heli lahaa cherry varietal, waxaad iibin kartaa ciyaarta duurjoogta ah ama geedka gebi ahaanba ka duwan. Sidaa daraadeed, kala dooro sida ugu macquulsan ee suurtogalka ah si aanad u isticmaalin qadar fara badan oo khayraad ah oo ku saabsan abuurista geed aan faa'iido lahayn.
Marka hore, waxaan eegnaa nidaamka asaasiga ah. Dhererka qulqulka ugu weyn waa in uu ahaado ugu yaraan 30 cm, sidoo kale, nidaamka asaasiga ahi waa in lagu muujiyo tiro badan oo xididada dhinacooda ka baxsan. Next, si taxadar leh u baaro nidaamka xididka.
Korniinka, waxyeellada, waxyeello ama dhibco midab leh oo aan la fahmi karin waa inay maqnaadaan. Marka hore, geed buka ah ayaa dhiman kara kaddib marka la beerto, iyo haddii ay qaadato xididka, markaa waa inaadan ku xisaabin dhalidda sare.
Xasuuso in xididada, sida qaybaha kale ee geedka, waa in ay helaan helitaanka oksijiinka. Haddii rhizome lagu duuduubay cellophane, ka dibna si fudud ayuu u ciribtiri karaa "qoyaan", iyo qoyaanka kor u kaca ee maqnaanshaha oksijiin ayaa keenaya samaynta cuduro fangas ah oo kala duwan.
Waxa kale oo haboon in la iska ilaaliyo geedo leh wadaag qalalan, sababtoo ah waxaad isticmaali doontaa waqti aad u badan oo isku dayaya in laga saaro seedling ka ah "comatose" gobolka, iyo badbaadada dheeraad ah waxay ku xirnaan doontaa xaddiga waqtiga inta lagu guda jiro xididdada ay qalalan yihiin.
Sidaas isku day in aad soo iibsato geedo, xididdada kuwaas oo ku jira jilitaanka dhulka ama, xaaladaha ba'an, biyaha. Ku celi dhowr jeer ku saabsan goortii seedling qoday, iyo ugu fiican ee dhan - iibsato geedo yar yar ee xanaanada, taas oo dhirta laga saari doonaa substrate kaliya ka dib iibsashada.
Sida taajka, waa in si wanaagsan loo horumariyo. Joogitaanka waxyeello kasta, lebbiska ama koritaanka lama oggola. Haddii taajku ka baxo caleemaha, waa inaad weydiisaa in aad yarayso jilifka, kaas oo muujin doona in geedku uu qalo (iyo mararka qaarkood ay dhacdo). Marka xigta, kormeer si aad u jilciso dildilaasyada waaweyn. Maaddaama kala duwanaanta noocaas ahi ay ka timaaddo miraayad sababtoo ah jilif dillaacay, waa inaadan ka iibsan seedling kaas oo lakabka lagu ilaaliyo asal ahaan asiibay.
Si aadan u iibin geedka gebi ahaanba kala duwan, marka hore ugu fiirso midabka iyo dhumucda jilifka. Xarku waa inuu ahaadaa cawl-bunni, dhuuban, oo aan lahayn mugdi madow ama iftiin. Dildilaaca dufan leh ayaa loo oggol yahay, maadaama ay yihiin muuqaal ka mid ah noocyada kala duwan.
Ka dib markii la iibsado seedling ka hor inta aan la beeri, waxaa lagama maarmaan ah in laga ilaaliyo qorraxda tooska ah, iyo rhizome, haddii aysan ka fogeyn koomaada dhulka, ku duub jardiinada ama warqad.
Diidmada waa in aan dib loo dhigin dhawr maalmood si ay u ilaaliso qoyaanka geedka. Kaliya marka kiisaska rookeska la siiyo waqti la qoynayo, markaad degganaato waad sugi kartaa.
Marka hore, waxaan dooraneynaa aalado qorrax leh oo ku yaal buurta aan dabayshu ku dhicin dabeylaha dabiiciga ah, waxaana si weyn looga ilaaliyaa qoraallada.
Waa muhiim! Kaydinta biyaha badani lama oggola. Gogosha lagu taliyey ma aha wax ka badan 3 m.
Next waa in la qiimeeyo sida aysidhka ee ciidda iyo sida ugu dhow ee suurtagal ah in ay index of dhexdhexaad ah. Cherry waa mid aad u cakiran ee acidity, sidaas xitaa xeelad yar oo saameyn xun ku leh habka nuugista ee walxo waxtar leh iyo raad raaco xubno ka soo ciidda. Hadda waa waqtigii lagu qodo godka hoostiisa. Bannaanka u badan ayaa ku talinaya godka qodaya horay. Qaarkood ayaa ku doodaya in daloolka geedka hoostiisa lagu qodayo lix bilood ka hor beerashada, kuwa kale - bil gudaheed.
Waxaan kugula talineynaa inaad sugto ugu yaraan 2-3 maalmood si uu geedku u sii fiicanaado.
Waxaan xasuusineynaa in ay suurtogal tahay in la fuliyo soo degitaanka labadaba guga, iyo dayrta. Beeraha xilliga dayrta ayaa doorbidaya gobollada koonfureed, sida xilliga qaboobaha geedku wuxuu yeelan doonaa wakhti uu ku xirmo, iyo xilliga guga way korayaan.
Waxaan qodo dalool ah oo qoto dheer oo ballaaran iyo ballaadhan si nidaamka xididka, ka dib markii loo geliyo, ma degto meel dhan. Muuqaalka sawir-qaadashada waa 40 cm, qoto dheeruna waa 60 cm, waxaanu samaynaa derbiyada godadka leh qashinka toosan, sidaa darteed ciidku ma dego badan.
Qodbo godka, waxaan u qeybineynaa dhulka oo dhan qaybta laba qaybood. Qaybta ugu horreysa waa ciidda sare, oo bacrin ah, oo aan u isticmaali doonna beeritaanka. Qaybta labaad waa dhul hoose, oo laga saari karo meel kasta oo kale, looma isticmaali doono beeritaanka. Ugu sareeya ciidda isku qasan leh humus / compost iyo Bacriminta macdanta. Qadarka qayb kasta oo yar ayaa la kordhin karaa ama yareyn karaa, iyadoo ku xiran mugga ciidda laga soo saaro ceelka. Celcelis ahaan, 1 doofaar oo ku dar 30 kg oo humus ah, 1 kg oo dhagax fosfat ah iyo 150 g oo ah sulfate potassium. Si fiican u walaaq si markaa xididadu aysan ku xirnayn "biyaha macdanta".
Marka xigta, ku shub qashinka xumbada (taas oo hoos u dhigaysa aysidhka carrada oo u adeega sida dheecaan) ilaa hoose ee daloolka iyo wadida aaladda taageerada, taas oo u baahan tahay 1 m oo ka sarraysa heerka dhulka.
Ka dib markaa, bartamaha godka waxaannu samaynaynaa tuulo yar (qiyaastii 20 cm) oo ah ciidda caadiga ah ee laga qaado goobta. Qulqulaya seedling si ay u noqoto xariiqda nidaamka xididka "fadhiistay" tuulada hoosteeda, toosi xididada oo si taxadar leh u buuxi daloolka isku dar ah ciidda.
Marka daloolku si buuxda u buuxsamo, waa inaad si taxadar leh u dhigtaa ciidda iyo, haddii loo baahdo, buuxi ciid yar. Ugu dambeyntii, waxaanu biyo siin karnaa 2 baaldiyo biyo diirran.
Waa muhiim! Qoorta xididka waa inay ahaataa 5-7 cm oo ka sarraysa heerka dhulka.
Haddii sawirkaas oo loo yaqaan 'cherry loo maleynaayo in la beeray' ayaa hore loo isticmaalay ujeedo beeraha ah, ka dibna waa inaad kobcisaa ciidda macdanta biyaha iyo humus / compost.
Liiskan soo socda ee dheeraadka ah waa in aan lagu dhex gelin ceelasha beerto, laakiin ciidda ku wareegsan daloolka si markaa daaqsinka koraya uu u helo dhammaan qaybaha muhiimka ah iyo nafaqooyinka waqtigooda.
1 kiiloomitir. Waxyaabahan soo socda:
humus ama compost - 10 kg;
Haddii aad dhirtii dhowr jeer dhashid, ka dibna isticmaal mid ka mid ah qorshahan soo socda:
Meelaha yaryar, waxaan isticmaalnaa qorshaha 2 x 2.5 m.
Si aad u hesho taajka ugu kicinta ee aan ku nool nahay sida waafaqsan nidaamka 3 x 3,5 m.
Daryeelka dhirta waxaa loola jeedaa ma aha oo keliya waraabinta biyaha, laakiin sidoo kale codsiga bacrimin, iyo sidoo kale samaynta saxda ah ee taajka, taas oo go'aamisa tirada berry iyo cabbirka.
Waxaan bilaabeynaa in aan biyaha qabanno ka dib bararka kelyaha. Waa lagama maarmaan in la shubo 30 litir oo biyo diirran wakhti (waa diirran yahay in la dedejiyo geeddi-socodka qaabka cagaaran). Waxaa lagama maarmaan ah in lagu qoyo ciidda inta lagu jiro xilliga koritaanka oo dhan, iyo ka dib marka ay ka baxaan caleemaha, waxaa lagu talinayaa in ay fuliyaan waraabinta dayrta dayrta.
Laga soo bilaabo inta lagu guda jiro xilliga beerto waxaanu hubinay in cherry marxaladda ugu horreysa ay leedahay dhammaan walxaha lagama maarmaanka u ah korniinka iyo horumarka iyo qadarka ku filan ee wax ku oolka ah ee jirka, waxaanu fulineynaa dharka dhamaystiran oo dhan 1.5-2 sano kadib markaad beerto. Inta lagu jiro xilliga sii kordhaya waxaa lagama maarmaan ah in la quudiyo geedka laba jeer leh humus ama compost ka dib waqti isku mid ah. Xilliga dayrta, waxaannu xidhnaa fosfooraska iyo bacriminta potash ee goobada dhow ee stem, iyo Bacriminta nitrogen ee guga. Laguma talin in lagu daro quudinta oo ka kooban dhismaha guud ee NPK, maaddaama nitrogen looga baahan yahay guga kaliya, inta lagu jiro qorista cagaarka. Nitrogen xagidda kaynta waxay u keeni doontaa waxyeello badan oo geedka, sidaas awgeed waxay sii wadi doontaa kordhinta cagaarka cagaaran marka aad u baahan tahay inaad daadiso caleemaha.
Si aan waqti loogu nadiifiyo jaridda dhirta joogtada ah iyo dabacsanaanta, isla markiiba ka dib markii la beero cherry, waxaa ka wanaagsan inaad qaawiso peat ama humus. Haddii mid ka mid ah geed ma aha sidaas muhiim, ka dibna for beerto waaweyn waa lagama maarmaan in la isticmaalo mulch. Ka dib markaad gashay wareegga garbaha, jaridda dhirta iyo dabacsanaanta looma baahna. Sidoo kale, caleemaha mulch ma koraan, oo ciidda looma lumiyo qoyaan mana ka badan yahay kulaylka / kuleylka.
Waa muhiim! Si looga hortago mulchka inuu noqdo "guriga" ee jirada, waxay u baahan tahay in la beddelo waqti ka waqti.
Haddii mid ka mid ah sabab ama mid kale oo aanad ku dhejin jirridda geedka, markaas waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u daboosho xididada si aad u hesho helitaanka oksijiinta. Si loo dabciyo ciidda waa inay ahaato mid gaar ah subaxa ama ka dib qorrax dhaca. Waxaa haboon in la xusuusto taas xitaa ka dib marka la gooyey, qoorta xagjirka ahi waa inay ka sareeyaan substrate, haddii kale waxaa laga yaabaa in qudhmi.
Labadii sanno ee ugu horreysay ka dib markii la beero, ma nihin in aan taabto qaybta kor ku xusan ee geedka, si aanay u waxyeeleynin geedkii daciifka ahaa. Waxa kaliya ee loo baahan yahay in la sameeyo xilliga koritaanka sapling waa in la xoqo dhibicda koritaanka si aan geedku uusan u samaysan taajka dhererka, laakiin wuxuu ku koraa width. Ka dib 2 sano laga bilaabo xilliga soo degitaanka, manjooyin waxaa la fuliyaa 2 jeer sanadkii - guga iyo dayrta. Inta lagu jiro manjooyin guga, waxaan u baahanahay in la gooyo laamaha u baxda, iyo sidoo kale saaro jiran iyo waxyeelo. Ka dib markii la gooyo, taajku waa inuu yeeshaa qaabka saxda ah si loo ilaaliyo quruxda heesaha iyo fududeeyso habka goosashada.
Goobo dayrta xilliga dayrta waxay ku lug leedahay qaadista caleemaha jir. Waxaad u baahan tahay inaad jarjartey laamihii aad ka soo ururisay beerihii ugu yaraan. Mustaqbalka, caleemaha noocan oo kale ah ayaa "soo saari doona" beruud yar iyo wax yar, halka qiimaha cuntadu uu isku mid noqon doono.
Baro sida loo badbaadiyo cherry xilliga jiilaalka.
Cherry "Lyubskaya" waxaa saameeya qaxootikiska iyo moniliasis.
Cocomycosis waxaa sababa fayruska Socotomy. Dhibaatooyinka cas waxay bilaabaan inay muuqdaan caleemaha, ka dib markii fangasku u keeno inay hore u dhacaan. Dhibaatooyin badan, dhibco ayaa laga yaabaa inay muuqdaan on petioles, caws, miraha, iyo caleemaha yar yar. Cocomycosis wuxuu ku dhacaa cimilada roobka diiran. Tani waxay inta badan ku dhacdaa xagaaga iyo gu'ga. Qiyaas ahaan ka hortag, waxaan ku talineynaa nadiifinta bil kasta ee caleemaha, cawska qallalan iyo caws, sababtoo ah waa arrin saameyn ku yeelan karta horumarinta cudurka. Cuntooyinka fangaska waxaa lagu qaadaa dabaysha, sidaa daraadeed xaqiiqda ah in dhammaan beeraha ay ku dhici karto in aan laga saari karin. Daweynta geed leh fungicides.
Jeeriga la jari jiray muddada bararka kelyaha. Geedka ku dhow jirridda geedka waa in lagu daaweeyo daroogada "Abiga-Peak". Moobeylka xiga waa la fuliyaa wakhtiga marka burooyinkooda la xiro. Tani waxay kaa caawinaysaa daroogada "Horus".
Haddii cudurku uusan soo laaban ka dib ubax, waxaan ku talineynaa in laga gooyo laanta laxiriirta 14-20 maalmood kadibna gubo. Ka dib goosashada, waa inaad ku buufisaa dareere cherry Bordeaux.
Wakiilka keena moniliosis waa monilia fungus. Wuxuu marka hore u muuqda qoriga ubaxa, ka dibna wuxuu kufilaa caleemaha. Markaas qaybta ubaxa, caleemaha iyo caleemaha yar yar oo qalalan. Cudurku wuxuu ku dhacaa heerkulka hooseeya. Waa sahlan tahay in la ogaado cudurka. Dhibbo cufan ah ayaa ka muuqda jilif, taas oo fog oo u eg duuga. Markaas miraha waxaa lagu daboolay isla taabashada. Caleemuhu way engegaan iyo berry oo qudhmi iyo dayrta.
Si aad isaga ilaaliso guuldarada, waxaad ku ridi kartaa cherry isla daroogada "Horus". Qaar ka mid ah khabiirada waxay kugula talinayaan daaweynta dhirta ka hor inta aan ubaxin daroogada Mikosan-B ama Skor. Waxaad ku daaweyn kartaa geed miro leh dareere Bordeaux ka hor iyo ka dib ubax.
Of the cayayaanka cherry "Lyubskaya" waxay saameeyaa dulin iyo dulin. Waxaad ka takhalusi kartaa saabuun iyo saabuun. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay kaliya ka caawineysaa kiisaska yar-yar ee weerarka. Cudurka qaaxada, daawooyinka Fufanon (ka soo horjeeda dulin-nuugista), Aktellik (ka hortaga jiirka) iyo Karbofos (ka horjeeda aphids) ayaa loo isticmaalaa.
Laga soo bilaabo wixii aan hore uga hadalnay, waxaynu oran karnaa faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka "Cheesskaya" cherry.
Kala duwanaanshuhu waa mid isku-dhafan. Faa'iidada ayaa ah in cherry si madax banaan loo karin karaa, iyada oo aan ka qaybqaadashada cayayaanka pollinating.
Xilliga bilowgiisa shucaacu. Haddii aad u hoggaansanto dhammaan dhaqamada beeraha, waxaad heli doontaa goosashada ugu horraysa 2 sano.
Waxsoosaar sare. Ilaa 30 kg oo jiir ah ayaa laga soo qaadan karaa geed kasta.
Ka tegista uma baahna waqti badan iyo kheyraad, maadaama uu geedku aad u yaryahay.
Cadaadiska barafka xun. Cherry wuxuu leeyahay iska caabin celceliska dhaxan, sidaas darteed sii kordhaya ee gobollada waqooyiga waxaa suurtagal ah oo keliya kuleylka ku filan.
Saamaynta taban ee heerkulka heerkulka. Iyada oo ay ku xiran tahay qaabka qaab dhismeedka jilifka, dildilaaca ayaa laga arki karaa jirridda geedka. Tani waxay dhacdaa sababtoo ah isbeddelka heerkulka. Dildilaaca waxay sameeyaan jiirarka u nugul cudurada viral iyo fungal.
Muddo gaaban oo fruiting ah. Iyadoo dhalid sare ah oo xasilan, geedka ayaa si dhakhso ah u baxsan, sidaas darteed cherry waxaa la koray 16 sano, ka dib taas oo waxaa lagugula talinayaa in la bedelo leh seedling cusub.
Cadaadiska sare ee midhaha. Miraha aadka loo yaqaan "acidic" kuma haboona dadka ay ku jirto kiimiko sare, sidaas awgeed alaabada badanaa loo isticmaalo wax soo saarka iyo caanaha.
Darajada ugu fiican waxay ku haboon tahay labada jardiinooyin waawayn, iyo dhulalka xaafadaha. Ogaanshaha sifooyinka faahfaahsan ee Cherry Lubskaya, waxaad ku barbar dhigi kartaa noocyo kale oo doorasho sax ah marka aad gadaneyso geed yar. Xasuuso in cherry uu bilaabmayo inuu midho dhalo oo keliya sanadka 2aad ka dib marka la beerto, iyo geeddi-socodkani ma kicin karo codsiga bacriminta macdanta ama carrada madow. Raac dhamaan xeerarka tiknoolajiyada beeraha si loo helo dalag tayo wanaagsan leh.